China Iphise Tatoazy famokarana herinaratra sy famokarana | MOLONG
Fomba fanaraha-maso roa an'ny loharanom-pahefana nomerika nomerika ho an'ny milina Tatoazy Multifunctional Red Skull Tattoo Power Supply
1. Ny bokotra herinaratra dia manana bokotra fametahana fotoana, tsindrio raha hanomboka sy hijanona, tsindrio lava ny telo segondra hatramin'ny fanadiovana aotra
2. Amin'ny bokotra plus sy minus, ny press lava dia afaka manampy sy mampihena ny herinaratra tsy tapaka.
3. Manaova dingan-dàlana lava ary alefaso maody indroa hiova.
4. Ny bokotra efatra dia azo apetraka hamonjy ny asan'ny volt fahefatra.
5. Fiovan'ny maody indroa
7. Fampiasana amin'ny fotoana
MOLONG TATTOO SUPPLY dia mpanamboatra fitaovana fanaovana tatoazy matihanina efa an-taonany maro tamin'ity sehatra ity. Izahay ihany no manome vokatra avo lenta amin'ny vidin'ny fifaninanana ary manome tolotra tsara aorian'ny varotra. Manome karazan-doko fanaovana tombokavatsa be dia be izahay, fantsom-panafody azo ovaina, toro-hevitra amin'ny tatoazy, fantsika tombokavatsa, fanjaitra tombokavatsa, milina fanaovana tatoazy, kitapom-batsy, famatsian-kery amin'ny tatoazy ary kojakoja fanaovana tombokavatsa. Manolo-tena izahay hanao vokatra avo lenta ary hanome toky kalitao. Izahay dia tsy mitsahatra mampivelatra ireo fomba vaovao.
1. Inona no fonosana?
Fonosana miaraka amin'ny marika misy anay, fonosana tsy miandany, famonosana OEM (Raha angatahina bebe kokoa dia azon'izy ireo atao ny mametraka ny sary famantarana ao anaty fonosana, azo ifampiraharahana)
2. Ahoana ny kalitao?
Manome toky izahay fa ny vokatra ho azon'izy ireo dia feno, madio, miasa tsara.
Ny mpanara-maso ny Factory dia hanamafy fa ny fonosana dia ao anaty fepetra tsara alohan'ny fandefasana. Ankoatr'izay, raha misy olana azonao atao ny mifandraika amin'ny varotra MOLONG aorian'izay dia azo antoka fa azonao ny valiny sy ny vahaolana.
3. Inona no vidiny azontsika?
Vidin'ny orinasa. Mpanamboatra isika, afaka manolotra vidiny mifaninana. Indrindra ho an'ireo mpivarotra ambongadiny, fihenam-bidy manokana ho azy ireo hanampiana azy ireo hanitatra haingana ny tsenany.
4. Ahoana no hahazoako santionany?
Azo ifanarahana. Mazava ho azy fa tsy manome santionany maimaimpoana izahay. Amin'ny toe-javatra vitsy dia tsy maintsy mandoa ny entana ny mpanjifa ary mandefa santionany amin'ny gripa, fanjaitra ary kojakoja vitsivitsy izahay. Ho an'ireo mety ho mpanjifa, manolotra fihenam-bidy manokana izahay.
5. Mandra-pahoviana no halefa ny fandefasana?
Mandefa amin'ny Express toy ny DHL, UPS, Fedex, TNT, EMS sns. Matetika 3-10 andro,
Handefa sambo dia eo anelanelan'ny 15 sy 45 andro.
Miankina amin'ny antony isian'ny lamina, ny maso, ny elanelana ary ny fizotran'ny fahazoan-dàlana sns.
6. Inona avy ireo fomba fandoavam-bola?
T / T (famindrana banky), Western Union, Paypal, Alibaba antoka fandoavam-bola, Alipay Etc.
Previous: Fomba haingo voasokitra avo lenta Tatoazy tsy mihetsika Multifunctional Digital Tattoo Power Supply
Manaraka: MO tsy misy tariby manome famatsiana herinaratra Tattoo
TP-7 THUNDERLORD famatsiana herin'ny tatoazy
HELLO II famatsian-kery an'ny tatoazy tsy misy tariby
Aurora 2 Fanomezana herinaratra tatoazy
MO tsy misy tariby manome famatsiana herinaratra Tattoo